दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुम्ने/नेपाली पनि प्रभावित। - Malayakhabar
होम पेज अर्थ / कर्पोरेट दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुम्ने/नेपाली पनि प्रभावित।
दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुम्ने/नेपाली पनि प्रभावित।
काठमाडौं := कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावका कारण दक्षिण कोरियामा झण्डै पाँच लाख रोजगारी गुमेको छ । यति धेरै रोजगारी गुमेको यो दुई दशकयताकै उच्च हो । कोरियाको एक तथ्याङ्क अनुसार गएकाे महिना मात्र चार लाख ७६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या सन् १९९९ पछिको सबैभन्दा बढी हो ।
यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ । दैनिक आठदेखि १६ घण्टाभन्दा बढी काम हुने अधिकांश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि घटेर दैनिक आठ घण्टा मात्र काम हुने वा कम्पनीले सूचना टाँस गरी बेतलबी बिदा दिने वा वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने तलबी बिदा घट्ने गरी बिदामा बस्न लगाउने क्रम बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीलाई पनि परेको छ ।विशेषगरी आफ्नै देशमै खपत हुने उत्पादनको निर्यातमा सामान्य गिरावट आए पनि पनि बाह्य निर्यात हुने सामग्रीमा भारी गिरावटका कारण काम घट्ने क्रम बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियाले अधिकांश उत्पादन विदेश निर्यात गर्छ । तथ्याङ्क अनुसार रोजगारी गुमाउनेमा विशेषगरी १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । उनीहरूको संख्या कुल गुमेको रोजगारी संख्यामध्ये ४०।९ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ४५ हजार छ ।सबैभन्दा धेरै दुई लाख १२ हजार बढि रोजगारी होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यावसायमा गुमेको छ । सरकारले भने न्यून आय भएका जनताको निम्ति केही हप्तामै साढे पाँच लाखभन्द्या बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ ।रासस
अघिल्लो लेख सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार,ब्यावसाय? बन्दुक बोक्ने कि मन्त्री,नेताको ब्रिफकेस?
पछिल्लो लेख साउदी अरेबियामा कार्यरत ६ सय ७४ नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण/१ जना नेपालीको मृत्यु।
मलेसियन इमिग्रेशनद्वारा ६ नेपाली सुरक्षागार्डको उद्धार,कम्पनीमाथी श्रम शोषणको आरोप।
कोरोना कहरकै समयमा विदेशबाट १ लाख २३ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए।